Olee otú ntọlite ​​na-eji iCloud Photo Ịkekọrịta. t
1.HOW ka Mbido iCloud Photo nkekọrịta ọrụ
2.HOW ịkọrọ iCloud Album na Tinye Photos na Shared Album
3.HOW na-amasị na ikwu na nnwekọrịta Photos
ICloud Photo Ịkekọrịta bịa wuru na ọ bụla iPod, iPad ma ọ bụ IPhone nke nwere iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ iOS 9 ruo ụbọchị. Site n'enyemaka nke ọrụ a, otu onye nwere ike mfe ịkọrọ ya photos collection na ezinụlọ ma ọ bụ enyi. Nke a na-enye ohere a onye ka ndị ọzọ ndị mmadụ n'otu n'otu ịgbakwunye foto, otú a ọ na-eme iCloud Photo nkekọrịta ọrụ a oké akụ nke na-echeta. Ọzọkwa, ndị òtù nke Phot Stream nwekwara ike na-amasị ma kwuo na photos. Ozugbo a onye na-emepụta a Photo Stream (Shared) na-agwa ndị mmadụ, ndị nke ọzọ ga-ikot isonyere. Ndị ọzọ dị nnọọ mkpa ịnakwere na ha ga-amalite na-anata Ịma Ọkwa na mmelite si ngwa nke Photos mgbe ọ bụla a onye esịnede ke otu na-agbakwụnye photos na ya. N'ihi na ndị mmadụ na-adịghị enwe Macs, iPads ma ọ bụ iPhones na iCloud Photo Ịkekọrịta ngwa nwekwara ike ime ka onye na iCloud njikọ nke nwere ike mgbe na-akọrọ ndị ọzọ dị iche iche. Niile ha nwere ime bụ pịa na njikọ ha ga-akpọga ndị webpage nke iCloud Photo Ịkekọrịta.
Part 1 OTÚ Mbido iCloud foto nkekọrịta Ọrụ
Ahu nagide ọrụ nke iCloud Photo Ịkekọrịta, niile a mmadụ mkpa bụ ihe iCloud akaụntụ na ọhụrụ software na ha iOS ngwaọrụ, ọ nwere ike ma ịbụ gị iPod, iPad ma ọ bụ iPhone. Ọ dị mfe iji ọrụ a, niile i nwere ime bụ soro ntuziaka n'okpuru:
1. On n'ụlọ gị gị na ihuenyo aga Ntọala,
2. Pịgharịa ala na enweta na iCloud
3. Kwado ndị Photos nhọrọ.
4. Ugbu a si ebe a, nanị enyere ndị iCloud Photo Ịkekọrịta
The videos na foto na iCloud Photo Ịkekọrịta adịghị eji ihe ọ bụla nke iCloud Nchekwa na-akwado foto formats bụ PNG, TIFF na JPEG. N'ihi na Videos na-akwado formats bụ QuickTime video faịlụ na MP $. The videos nwere ike gbagoo 5 nkeji na 720p mkpebi ike ga-eji. Na a na-akọrọ album karịa videos na foto i nwere ike na-echekwa na-gburugburu 5000. Otú ọ dị, mgbe ịgba na-ruru i nwere na-ihichapụ ụfọdụ nke vidiyo ma ọ bụ foto.
A Photo Stream nke a na-akọrọ-ewere dị ka ọzọ onwe na ala ịkọrọ gị collection nke foto na dị nnọọ ndị nke gị nhọrọ. Nke a mgbe ụfọdụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe mgbe ị na-achọghị biputere foto na mmadụ mgbasa ozi, ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-adịghị a Twitter, Facebook ma ọ bụ ihe ọ bụla mmadụ mgbasa ozi akaụntụ. Ọzọkwa, dị nnọọ ka ndị ọzọ na-elekọta mmadụ media webpages, i nwere ike ikwu ma ọ bụ dị ka ihe osise a ọzọ ala ụzọ.
Part 2 OTÚ ịkọrọ iCloud ALBUM NA gbakwunye foto NA nnwekọrịta ALBUM
Ịkekọrịta gị foto dị mfe na ọrụ a. Ị nwere ike ịtụtụrụ site na ndepụta nke na-ege ntị na-ahọrọ ndị nwere ike ikwu dị ka na-ele gị videos na photos. Ọ na-enye gị ike ka ịgbakwunye foto na vidiyo na album ọ bụrụ na ha nwere otu iOS ngwaọrụ. Ike a na-akọrọ album, dị nnọọ soro ntuziaka n'okpuru:
1. Gaa photos nke dị na n'ụlọ ihuenyo,
2. Kpatụ baajị na lowermost akụkụ nke ihuenyo nke na-ekwu Shared,
3. Kpatụ Ịkekọrịta na mgbe ahụ New Shared Album.
4. Dee a aha maka album na mgbe ahụ enweta "Ekem".
Ugbu a, i nwere ike na-agba ndị mmadụ site ha adreesị email ma ọ bụ nanị site na ịme ọpịpị Tinye Button site na kọntaktsị na mgbe ahụ ike. Ndị ọzọ nwekwara ike na-ele gị album gị ikike nanị site aga na nnwekọrịta Albums ndepụta mgbe ahụ ndị mmadụ na-enyere ndị ahụ Public weebụsaịtị.
Nkebi nke 3 OTÚ na-amasị na ikwu na Foto
Na-aza ajụjụ ma ọ bụ dị ka mmadụ foto nnọọ ime na-esonụ:
1. Kpatụ Photos ngwa gị iOS ngwaọrụ,
2. Kpatụ nnwekọrịta taabụ nke dị na ala,
3. Mgbe ahụ, na-aga n'ihi Ịkekọrịta button nke dị na n'elu aka ekpe,
4. Mgbe a ị ga-enweta na "Aha nke Stream" nke a bụ ebe foto ndị nke ị nwere ike ikwu ma ọ bụ na-amasị. Ugbu a, i nwere ike tinye smiley ihu, ma ọ bụ ibuga gị ozi gị hụrụ n'anya.
> Resource> iCloud> Olee otú iji ntọlite ​​na-eji iCloud Photo Ịkekọrịta.